Kenya oo joojisay duulimaadyadii G/Africa. - Wargeyska Faafiye
In ka badan kun qof ayaa u geeriyooday caabuqa Ebola.
Ilaa iyo haddana Kenya lagama helin kiisas cudurka Ebola ah.
Shirkadda ayaa sii wadaysa duulimaadyada ay ku tagto Nigeria halkaasi oo ay afar qof ugu geeriyoodeen caabuqa Ebola.
Joojinta duulimaadyada shirkadda waxa ay bilaabanaysaa maalinta Arbacada ah.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMohamed Bin Zayed receives Somalia President.Saraakiil Caddaan Ah Oo Lagu Dilay Garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo.Wafdi ka socda Iskaashiga IslaamkaShabaab oo sheegaysa sarkaal Burundes inay dileen.Alshabaab ban mobile internet over fears US can use data to track militant movements.